20 taona nitoriana sy nanabeazana: hamoaka DVD sy hanolotra seho miavaka ny Feomiray | NewsMada
20 taona nitoriana sy nanabeazana: hamoaka DVD sy hanolotra seho miavaka ny Feomiray
Tao amin’ny FJKM Ambalavao Isotry no nihaonan’ireo mpikambana izay samy manana ny finoany avy, saingy samy resy lahatra fa tsara ny midera ny Tompo. Mandia ny faha-20 taona nitoriana an-kira sy nanabeazana ny tarika Feomiray.
Famoahana ny kapila mangirana amin’ny endrika DVD laharana voalohany, hirakitra sanganasa mahatratra 8 toy ny “Feomiray”, ny “Tsara ianao”… Io no ho tsangambaton’ ny fankalazana ny faha-20 taon’ny tarika Feomiray. Hisy koa ny seho miavaka arahina fiaraha-misakafo, hotanterahana, ny tolakandron’ny alahady 2 desambra ho avy izao, etsy amin’ny efitrano malalaky ny INTH Ampefiloha.
Hampiavaka ity kapila mangiran’ny tarika Feomiray ity ny fisian’ny fampahafantarana ny mombamomba ireo mpikambana tsirairay mandrafitra ny tarika sy ny famitinana ny lalana nizoran’ny tarika nandritra izay 20 taona tao an-tsahan’ny hira evanjelika izay. “Ezahina ho kanto ny seho hatolotra mba ho mendrika ny fahatsaran’Andriamanitra”, hoy i Diary. Fanamby goavana napetraky ny tarika rahateo, amin’ny maha kristianina ireo mpikambana ao aminy ny hoe : “Tsy ho rambony fa ho lohany”.
… Ny 25 desambra izao, hanatontosa rindran-kira, etsy amin’ny FJKM Ilanivato iarahana amin’ny tarika sy mpanakanto manana ny maha izy azy ny Feomiray. Anisan’izany ry Bodo, Mialy Rakotomamonjy ary Laurent Rakotomamonjy. Fantatra fa anisan’ireo mpanakanto novolavolaina tao anatin’ny tarika Feomiray ry Titianah, Stella, Vetso (Tarika Fanasina), Mpiremby, Tsiorisoa.
Tsy mifidy gadona lalaovina toy ny slow, country, bagasy, rock, sns, izy 13 mianadahy mandrafitra ny tarika. “… Tsotra ny antony, ny ahafahana mampiray ny olombelona tsy ankanavaka amin’Andriamanitra ary ny hanamorana ny fomba fampitana ireo hafatra anatin’ny tononkira ho an’ny sokajin’olona rehetra”, hoy i Diary, mpitarika ny Feomiray. Mampiavaka ny tarika ny fisian’ny fifamenoana eo amin’ireo samy mpikambana. Ireo mpihira ao anatin’ny tarika dia samy afaka mitendry zavamaneno ny ankamaroany ary ireo mpitendry ihany koa dia havanana amin’ny lafiny fihirana. Samy havanana amin’ny lafiny famoronan-kira ihany koa ireo mpikambana.
Basketball: plus grand nombre de joueurs licenciés chez les séniors 21/01/2022
Football: le championnat réunionnais continue d’attirer les joueurs malagasy 21/01/2022
CHRONIQUE: DIGNE D’HOLLYWOOD 21/01/2022
Ida Pfeiffer: Voyage à Madagascar (179) 21/01/2022
Pierres industrielles: la transformation, toujours un atout 21/01/2022